Baro Ingiriisi iyo luqad shisheeye bilaash ah. Hagaaji ereyada
Guddiga Waxbarashada Caalamiga ah
Codsiga bilaashka ah ee mobile si loo hagaajiyo erayada iyo
barashada luuqadaha ajnebiga ah
Qalab waxbarasho wada-xiriirka labada dhinac
inta u dhaxaysa kuwa ku hadla afka hooyo
LingoCard waxay bixisaa barxad caalami ah oo caalami ah oo loogu talagalay barashada luuqadaha shisheeye iyo dhaqanka wada hadalka.
Waxaan xallin karnaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bartayaasha luqadda:
Hagaajinta ereyada iyo kaydinta ereyada adag ee lagu xasuusto
Waqti la'aanta barashada luuqadaha shisheeye
Raadi dadka ku hadla afkooda hooyo si ay u bartaan luuqada
Codsiga bilaashka ah ee mobile
In ka badan 2,000 kun oo eray ah oo ka kala socda luqadaha ugu caansan adduunka
Uruurinta macluumaadka macluumaadka miisaaniyada ee luuqadaha shisheeye
Keydinta xayeysiiska ee ereyada adag ee-xusuusta
Dhageysiga ereyada iyo weedhaha
Awoodda lagu baranayo 67 luqadood oo ajnebi ah iyada oo aan lahayn xiriirka internetka
Abuurista macluumaadka shakhsi ahaaneed ee shakhsi ahaaneed oo leh ereyada aad hadda baraneyso
Ciyaaryahan cajiib ah oo loogu talagalay si toos ah dhegeysiga macluumaadkaaga
Abuuritaanka kaararka luuqada ee sawirada ku lifaaqan
Ciyaaryahan cajiib ah
Ma heysto waqti waxbarasho?
Iyada oo leh nooca maqalka gaarka ah waxaad baran kartaa luqadaha mar kasta iyo meel kasta:
Intii aad wadid baabuur, jimicsi, shaqada - marka la barbardhigo ganacsi kasta.
Kaliya dooro xog-ururin kasta, soo bandhigi cayaarteena oo dhegeyso.
Miyaad rabtaa inaad baratid waxyaabahaaga waxbarasho?
Dhibaato la'aan - kaliya faylasha qoraalkaaga ku duub oo codsashada moobiilka oo dhegeyso!
Abuuritaanka barmaamijka waxbarashada caalamiga ah
Abuurista qalabka kuu oggolaanaya inaad xasuusato erayo adag
Xoojinta xogta ugu badan ee suurtogalka ah ee ku jirta hal kheyraad
Ka caawi dadka inay xasuusiyaan erayada, odhaahaha iyo weedhaha
Abuurista codsiyada mobile-ka ee la heli karo ee loogu talagalay dadka jinsiyadaha iyo luuqadaha kale
Abuuritaanka codsiyada moobiilka ee ka shaqeeya internet la'aanta meel kasta oo adduunka ah
Caawinaad ka timid dugsiyada luqadaha iyo macallimiinta luuqadaha shisheeye
Abuurista qalabka loogu talagalay barashada saxda ah ereyada saxda ah
Macluumaadka bilaashka ah
Diiwaanka firfircooni waa mid ka mid ah ereyada xusuusta leh (jumladaha) kuwaas oo lagu daro si toos ah oo si otomaatig ah looga helo database kasta adigoo gujinaya ...
Diiwaanka firfircooni waa mid ka mid ah ereyada xusuusta leh (jumladaha) kuwaas oo lagu daray manuuc ahaan iyo si toos ah keydka macluumaadka adigoo gujinaya "Move to Active". Macluumaadka firfircooni waa meesha ugu muhiimsan ee kaydinta ereyada iyo talooyinka cusub. Waxaad halkan ku dari kartaa tirooyin aan xadidnayn. Erey kasta oo cusub ayaa la abuuray ku xigta liiska. Waxaad riixi kartaa liistada iyo kaadhka faaruuska leh ereygan (jumlad) ayaa la furi doonaa. Diiwaanka firfircoon ayaa lagu kaydiyaa dalabyada mar walba, iyada oo aan loo eegin luuqadaha isbeddelka, soo dejinta ama bedelida macluumaadka kale.
Waxaad abuuri kartaa xogtaada gaarka ah oo leh walxo waxbarasho oo laga helo dokumintiga qoraalka ah iyo u adeegso dhammaan qalabka barnaamijka LingoCard.
Waxaad abuuri kartaa xogtaada gaarka ah oo leh walxo waxbarasho oo laga helo dokumintiga qoraalka ah iyo u adeegso dhammaan qalabka barnaamijka LingoCard. Xaddiga macluumaadka la soo dajiyay ma aha mid xadidan. Waa suurtagal in la abuuro xog-ururin cusub ama ku dari xogta horey u-soo-dejinta iyo horay loo soo dejiyey. Shaqadan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si madaxbannaan u sameysid walxo waxbarasho oo aad u isticmaasho qalabkayaga si aad ugu xasuusato.
Soo-qaad kaararka la soo qaatay. Haddii aad darsatay kaarka, waxaad u baahan tahay inaad u soo guurto "Daraasad" database ah adigoo riixaya "Buuxda Wax Baran" ee kor ku xusan ...
Soo-qaad kaararka la soo qaatay. Haddii aad darsatay kaarka, waxaad u baahan tahay inaad u guurto "Daraasad" xogtaada adigoo riixaya batoonka "Tababaran" ee korka kaarka furan. Iyada oo xogtaas ku jirta waxaad awoodi doontaa inaad la socotid tirada erayada la isku qurxiyo oo ku celi waxyaabaha la bartay hore.
Diiwaankaan wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta qormooyinka ugu badan ee loo isticmaalay 500. Ereyada waxaa markii hore loo soo bandhigay si ay u caan baxaan iyo isticmaalka joogtada ah ee isticmaalka hadalka.
Diiwaankaan wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta qormooyinka ugu badan ee loo isticmaalay 500. Ereyada waxaa markii hore loo soo bandhigay si ay u caan baxaan iyo isticmaalka joogtada ah ee isticmaalka hadalka. Qiimaha ugu saxsan waxaa lagu qoraa tarjumaadda erayga, erey kastana waxay yeelan kartaa micne badan oo turjubaan ah, qaar ka mid ah oo laga yaabo inay ku maqan yihiin kaararka. Qaybta xogta "500 eray Ereyada ah" waxaa ku jira 4624 database-yada waxqabadyo kasta oo 67 luuqadood lagu barto qalabyada korontada iyo 4489 xogta macluumaadka ee qalabka IOS. Waxaad ka dooran kartaa ereyada xusuusta oo aad u wareejisaan "Database Dash" adiga oo gujinaya "Move to Active" badhanka furan ee laga helo xogtan.
Diiwaankaan wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta ereyada ugu badan ee loo isticmaalo 5000. Ereyada waxaa lagu daraa sida loo isticmaalo isticmaalka luqadda qoran iyo hadalka. Haddii tababarka lagu jiro ...
Diiwaankaan wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta ereyada ugu badan ee loo isticmaalo 5000. Ereyada waxaa lagu daraa sida loo isticmaalo isticmaalka luqadda qoran iyo hadalka. Haddii tababarka aad xirtay codsiga ama aad ka tagtay diiwaanka oo aad rabto inaad ku laabato kaadhka hore, waa inaad gashaa magaca ereyga sanduuqa raadinta oo guji kaadhka aad doonaysid. Qaybta xogta "5000 Ereyo Caan ah" waxaa ku jira 4624 database-yada wax kasta oo isku dhafan oo ah 67 luuqadood oo lagu barto qalabka korontada iyo 4489 xogta macluumaadka ee qalabka IOS.
Diiwaankaan wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta jumladaha ugu badan ee loo isticmaalo hadalka hadalka. Iyada oo la adeegsanaayo xogta macluumaadkaan waxaad fahmi kartaa furitaanka hadalka iyo nidaamka qorista ...
Diiwaankaan wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta jumladaha ugu badan ee loo isticmaalo hadalka hadalka. Iyada oo la adeegsanaayo xogta macluumaadkaan waxaad fahmi kartaa hadalka ugu weyn ee hadalka iyo amarka qoritaanka jumlada luqadda aad wax ku baraneyso. Intaa waxaa dheer, waxaad baran kartaa weedhaha aasaasiga ah ee loo adeegsado isgaadhsiinta luqad cusub. Qeybta xogta "500 Geesinimo" waxaa ku jira 4624 database-yada wax kasta oo isku dhafan oo ah 67 luuqadood oo lagu barto qalabka korontada iyo 4489 database-yada qalabka IOS.
Iskaashi la leh hay'ad kasta oo waxbarasho
Talo soo jeedin ku saabsan horumarinta codsiyada
Talooyinka loogu talagalay isticmaalka qalabka barnaamijka saddexaad ee qaybaha
Isticmaalka hababka cusub ee baridda ee alaabta software-ka
Ku darista macluumaadka cusub ee codsigeena
Iskaashiga xayaysiinta iyo dhiirigelinta
Waanu ku faraxsannahay inaan tixgelinno nooc kasta oo la soo jeediyey ee iskaashiga. Waxaad soo diri kartaa wax alla wixii aad soo bandhigtay. Kaliya buuxi foomka hoose.
TILMAAMAHA LOOGU TALAGALAY CODSIGA MOBILEED
Ku rakib codsiga
Waxaad ka soo dejisan kartaa codsigeena bilaashka ah ee Google-ka (for Android devices) ama dukaanka Apple (for iPhones iyo qalabyada iOS).
Ka dib marka la rakibo, waa inaad doorataa luqaddaada hooyo iyo luuqada barashada liiska, ka dibna riix badhanka "INTERNALLY INSTALLING" iyo codsiga wuxuu abuuri doonaa database-yada barashada luqadda la doortay. Sidoo kale, xogta macluumaadka waxaa loo samayn doonaa xogta aad soo gashay iyo walxaha la baaray. Liiska buuxa ee xogta macluumaadka waxaad ka arki kartaa liiska codsiga.
Qalabka ku jira nidaamka hawlgalka Android ee tayo sare leh erayada iyo codka wanaagsan ee cayaarta, waxaad u baahan doontaa inaad ku rakibto (bilaash ah) "Google text to speech" codsiga laga soo qaato Suuqa Google Play. Ka dib markii aad ku rakibtay, waxaad u baahan tahay inaad furto qalabka si aad u furto "Language and input", qaybta "Qaybta qoraalka" qaybta "Google text to speech" nidaamka caadiga ah. Codka wuxuu ku shaqeeyaa qalabyada badan iyo luqadaha barashada. Haddii aad wax dhibaato ah ku heysato dhawaaqa dhawaaqa, fadlan riix badhanka "Nala soo xiriir" ee ku yaala menu kuna qor dhibaatadaada.
Samee kaararka cusub iyo buuxinta macluumaadkaaga gaarka ah
Si aad u qorto xogtaada oo aad abuurto kaararka cusub, riix badhanka badhanka (+ hoose), daaqada furan, gali qoraalka luqada hooyo iyo barashada. Kaarka bogga abuurista, waxaad riixi kartaa badhanka oo leh kamarad, ka dibna sawir shayga ama sawir ka soo qaado ururintaada oo lagu hagaajin karo dhinac kasta ee kaarka. Haddii aad aragto shay ama shay aan qiimo la garanaynin luqadda barashada, waxaad samayn kartaa sawir bogga si aad u abuurto kaar ama aad ka doorato sawir kasta oo aad ka heshay qalabkaaga kadibna qor ereyada dambe. Sawirrada ayaa lagu dari karaa si la mid ah kaararka horeba loo abuuray si loo hagaajiyo sawirada muuqaalka ah, waxaad samayn kartaa tan adigoo gujinaya badhanka saxda ah ee khariidadda (qalin-qoraalka ugu sareeya).
Qalabka wuxuu kaa codsan karaa ogolaansho inaad isticmaasho kamarad (si loo abuuro kaarar sawir leh). Waxaad u baahan tahay inaad si kalsooni leh uga jawaabto farriintan si aad u isticmaasho muuqaalka codsiga. Haddii aad ku jawaabtay "maya" farriinta, ka dibna waxay go'aansatay in ay isticmaasho hawsha lagu daro sawirada - waa inaad dib u soo celisaa codsiga oo u ogolaataa isticmaalka kadib.
Eeg iyo kaararka furitaanka
Hawsha ugu weyn ee codsigu waa abuurista habka 'Flash Cards' ee caanka ah ee qalabka gacanta oo loogu talagalay luuqadaha barashada ee waxtarka leh, erayada cusub iyo weedhaha. Si aad u aragto "Flash Cards" waxaad kaliya u baahan tahay inaad gujiso liistada database-ka la soo xulay, ka dib markaa kaarka la furayo. Si aad u aragto kaadhka xiga, si fudud u dheji shaashadda ama bidix ama isticmaal badhanka fallaadha. Si aad u aragto tarjumaadda ama micnaha ereyada, waxaad ku dhejisaa badhanka "Flip" ee ku yaal bartanka kaadhka kor ku xusan qoraalka muhiimka ah ama "Fareeshka" ee dhinaca bidix ee hoose.
Tafatir / Koobi / Kaar Kaarka
Si aad u hagaajiso, waxaad u baahan tahay inaad furto kaar kasta oo riix badhanka saxda ah (qalin) ee ku yaal liiska sare. Si aad u daabacdo qoraalka kaadhka, riix badhanka nuqulka dhinaca midig. Si aad uga soo qaadato kaarka codsiga, riix batoonka adigoo ku dhejinaya geeska midigta sare.
U kala wareejinta kaararka hal database oo kale
Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku wareejiso kaararka "database" Active (ururinta shakhsiyeed) iyo "Daraasad" database. Si aad u wareejiso xogta "Active", waxaad ku riixdaa barta hoose ee lagu magacaabo "Move to Active", si aad ugu wareejiso xogta "Daraasad", waxaad u baahan tahay inaad riixdo batoonka "Tababar" (badhanka sare ee kaadhka furan).
Isbedelada dhinaca koowaad ee kaadhka (muujinta ereyga / tarjumaadaha hore)
Waxaad dooran kartaa dhinaca koowaad ee kaarka furitaanka (ereyo ama tarjumaad). Si aad tan u sameyso, furo menu (dhinaca bidixda bidixda) oo dooro "Furan dhinaca hore", taas oo guji qiimaha la rabo.
Xulashada ama badalida xogta
Si aad uga soo qaadato xogta mid kale, kaliya waxaad riixdaa menu (bidixda bidixda sare) oo dooro mid ka mid ah waxaad u baahan tahay liistada liisaska, ka dibna riix midka la rabo oo furan.
Waxaad bedeli kartaa luuqada hooyo ama baraneysa ee codsiga adigoo helaya macluumaad cusub marka loo eego xulashadaada cusub. Si aad tan u sameyso, furo menu (dhinaca bidixda bidixda) oo guji "badalida luqadaha" badhan, ka dibna bogga xulashada luuqaddu furan yahay, meesha aad ka bedeli karto, markaa waxaad u baahan tahay inaad gujiso "Create the database" cusub badhan . Xogtaada "Active" iyo "Studied" waa la badbaadin doonaa, intiisa kalena waxaa lagu abuuray luuqadaha isbeddelka ah, sida ku xusan doorashadaada. XUSUUS si aad u badasho luuqadaha xogta (sameynta kaadhadhka) luuqadaha cusub ee aad dooratay, waxaad u baahan tahay inaad dhigto goobaha qalabkaaga!
Kaararka raadinta ama ereyga
Rugta midigta sare waxaad ka heleysaa badhanka raadinta, adigoo gujinaya waxaad ka heli karto kaar, erey ama turjumaad ku qoran xogta la soo xulay.
Si aad u dhageysatid ereyga ereyga, waxaad u baahan tahay inaad riixdo batoonka adigoo ku hadlaya buugga liiska ama bogga kaadhka furan. Waxaad sameyn kartaa habka tooska ah ee dhageysiga ereyada erayada adigoo furaya meningka oo riixaya batoonka raadiyaha ee "AutoArchive", ka dibna erey kasta iyo tarjumadu si toos ah ayey u dhawaaqi doonaan ka dib marka ay furaan dhinac kasta ee kaarka.
Si aad u bilawdid ciyaaryahanka, waxaad u baahan tahay inaad gujiso "badhanka" ee ku jira guddiga sare (bidixda raadinta). Riix badhanka cayaarta iyo dhammaan kaararka ayaa ku dhawaaqi doona amarka soo degaya iyada oo leh meel aad u-xasuusta waqtiga. Si aad uga bilawdo ciyaaryahan kasta oo ka mid ah liiska liiska, ka jooji liistada liistada meesha aad rabto, tirada lambarka cayaaraha ee kubbadda si toos ah isbeddel, kadibna riix batoonka ciyaarta mar kale kadibna bilow inaad ka ciyaareyso goobta la cayimay. Si aad u xirto ciyaaryahanka si fudud u riix batoonka "X". Xusuusnow in qalabyada Android loogu talagalay ereyada sare ee ereyada iyo codka wanaagsan ee cayaarta, waxaad u baahan doontaa inaad ku rakibto (bilaash) codsiga "Google text to speech" ee ka jira suuqa Google Play Market. Ka dib markii aad sameysatid TTS Google, waxaad u baahan tahay inaad furato qalabka korontada, fur furka "Language and input", ku dheji qaybta "Qoraalka hadalka" iyo samee "google text to speech" nidaamka caadiga ah.
Soo dajinta iyo abuurista macluumaadkaaga gaarka ah
Si aad uqoreeysid xogta, waxaad u baahan tahay inaad abuurto faylka qoraalka oo leh ereyada aad baraneyso iyo hal fayl oo qoraal ah oo turjumaad ah ama qeexitaan ku qoran kombiyuutarkaaga gaarka ah. Si aad tan u sameyso kaliya qoraalka qoraalka dukumiinti kasta (tusaale ahaan laga bilaabo) mashiinka kombiyuutarkaaga, ka dibna riix feylka - iska ilaali sida - sheyga Qodobbada, dooro UTF - 8. Xulashada Kumbuyuutarka UTF - 8 ayaa loo baahan yahay si loo saxo akhrinta qoraalkaaga qalab kasta.
Ka dibna dir fariimo qoraal ah oo ku socda qalabkaaga adoo isticmaalaya email, kaydinta daruurta ama fiilada USB. Tag macallinka codsiga, guji "Database Download", ee furan furan waxaad doorataa faylasha kaydsan ee qoraalka ah oo guji "Create a database" oo cusub.
Qalabka Apple, waa in aad marka hore furto faylasha, ku dhejiso ku dheji iyo faylasha ku dari codsiyada adiga oo riixaya "Ku soo dhoofinta LingoCard".
Waxaad abuuri kartaa xog-ururin cusub ama waxaad ku dari kartaa xogta ka hor inta aanad dooran qodobka ku habboon ee daaqada furan.
Si aad u furatid xogta la buuxiyay waa inaad doorataa liistada liisaska. Shaqadan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si madaxbannaan u sameysid wax walbo oo waxbarasho oo aad u adeegsato qalabkeena.
Fariin qalad ah. Nala soo xiriir
Haddii aad aragto qalad codsiga, tarjumid qaldan ama aad rabto codsiga arjiga, fadlan riix batoonka "Nala soo xiriir" badhanka oo ku qor fariintaada.